Isebenza kahle #Twitter #Marketing with #Hashtags | Martech Zone
Isebenza kahle #Twitter #Marketing nge #Hashtags
NgeSonto, ngoJulayi 26, i-2009 NgoLwesine, Novemba 20, 2014 Douglas Karr
Cha, lokhu akuyona enye yalezi ezicasulayo Thola abalandeli abaningi imikhankaso yokufaka ngokukhohlisa okulandelayo ku-Twitter ngabalandeli abangasebenzi. Le yindlela yokukhulisa izwi lakho ku-Twitter ukuze ama-tweets akho atholwe izethameli ezifanele ezingakulandeli.
Impendulo ibizwa nge-hashtag. Kukhona amathani abantu nezinhlelo isesha i-Twitter okwamanje ngezindaba zesikhathi sangempela nemicimbi efunwayo ama-hashtag.
I-hashtag uphawu lukakhilogu # olulandelwa umaki ochaza ukuthi yisiphi isihloko obhala ngaso. Uma ngibhala ngomnotho, ngingahle ngibhale #conomy ngaphakathi kwe-tweet yami. Uma ngibhala nge-Indianapolis, kungahle kube #indy. Uma usebenzisa i-Twitter ngebhizinisi, ukusebenzisa kahle ama-hashtag kufanele.
- UChris Messina ™ (@chrismessina) August 23, 2007
Nasi isibonelo. Lapho sikhipha ifayela le- I-WordPress Image Rotator, besingamane sibhale ku-twitter ukuthi ikhishwe futhi abalandeli bethu ngabe bafunde ngayo.
Esikhundleni salokho, sengeze ama-hashtag #amagama futhi #Xhuma kumyalezo:
Faka isibuyekezo sethu sakamuva ku-Image Rotator #WordPress #Xhuma! Ukulandwa okungaphezu kuka-78,000! http://t.co/vyDuwSjGsa
- Ubuchwepheshe Bezentengiso (@martech_zone) September 2, 2014
I-Tweet yathathwa ngokushesha futhi yabhalwa kabusha ngama-akhawunti amaningi aqapha lawo ma-hashtag, aholela ekufakweni kwamakhulu amaningi we-plugin. O, futhi le futhi kuyindlela enhle yokulanda abalandeli abafanele! 🙂
Nayi i-infographic enhle evela kuLeap emlandweni nokusetshenziswa kwe- ama-hashtag ezinkundleni zokuxhumana.
Tags: chris Messinai-hashtag yokuqalahashtagi-hashtag yokumakethaukumaketha kwe-hashtagTwitteri-hashtag ye-twitteryini i-hashtag
Aug 8, 2009 ku-1: 50 AM
Siyajabula ukubona ukuthi singasiza ukuthumela ithrafikhi ethile futhi sisabalalise isixhumanisi sithanda uDouglas omncane, ukuhambisa i-athikili yakho yangempela kusayithi leWPscoop kuzokusiza kakhulu yize kunjalo 🙂
Sep 14, 2009 ku-7: 25 AM
ngifunda i-e-book yakho, izinyathelo ezingama-25 zokubhuloga ze-SEO futhi ngihlale ngizibuza ukuthi iyini ithegi ye-hash. ngibe ku-twitter isikhathi esingaphezu kwezinyanga eziyi-6 futhi angikazitholi lezo zinto. manje ngiyazi! futhi manje sengiyalazi igama labo! Ngiyabonga!
Jun 3, 2011 ku-11: 01 PM
Kuyathakazelisa, ngiyabonga ngamakhanda phezulu!
Feb 9, 2012 ngo-6: 07 PM
I-athikili enhle uDouglas,
Ingabe ikhona iwebhusayithi lapho ngibona khona uhlu lwama-hashtag ahlobene nobuchwepheshe athandwayo? Sicela uphakamise.
Feb 10, 2012 ngo-2: 25 AM
Sawubona @ yahoo-RTSVY4AEAMGXMRAIJHGU6V73HQ: khipha isiza esisodwa engisaziyo nge-http: //hashtags.org - bayalandela banikeze okokufaka kuma-hashtag athandwa kakhulu.
UJun 13, 2012 ngo-4: 48 AM
great write up douglas ..encazelo enhle ngamathegi we-hash